२०७८ बैशाख १० शुक्रबार ०७:२४:००
वर्ष दिनको चेतावनीले पनि सरकारलाई चेतना नआएपछि अस्पताल बने असहाय
बेड भरिएपछि भेरी अस्पतालमा बिरामी बाहिरै, शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा पनि थप बिरामी भर्ना बन्द
नेपालगन्जलाई उद्धार गर्न र राष्ट्रिय स्तरमा आपत्कालीन रणनीति बनाउन अब सरकारसामु अमूल्य घडी
अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर थापाले बिरामीले बेड भरिएको बताए । उनका अनुसार आइसोलेसनको कुनाकाप्चामा समेत बेड राखेर उपचार भइरहेको छ । ‘आइसोलेसनमा खुट्टा राख्ने ठाउँसमेत छैन । अब जटिल प्रकृतिका बिरामीलाई पनि भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
भेरि अस्पतालमा एक सय ४२ आइसोलेसन बेड छन् । त्यस्तै, ३५ आइसियू र सात भेन्टिलेटर सुविधा छ । अहिले सबै भरिएका छन् । संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेकाले अहिलेको भन्दा जटिल अवस्था आउन सक्ने डा. थापाको अनुमान छ । ‘योभन्दा जटिल अवस्था आउने सम्भावना छ । सबैले वेलैमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘भेरी अस्पतालले मात्र धान्न सक्ने अवस्था छैन ।’
संक्रमितको संख्या निकै बढेको छ, सबै बेड भरिएका छन् । यही वेला आज (बिहीबार) मात्र १५ जना संक्रमित थपिएका छन् । उनीहरूलाई कहाँ राख्ने हो, टुंगो छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब हामीले हात उठाउन मात्र बाँकी छ ।’
भारतमा भयावह रूप लिएको कोरोनाको असर सीमावर्ती जिल्लामा बढी छ । पर्सामा पनि संक्रमित हुने र ज्यान गुमाउने संख्या बढेको छ । नारायणी अस्पतालका कोभिड कोअर्डिनेटर डा. सरोजरोशन दासका अनुसार पछिल्लो समयमा अस्पतालमा परीक्षण गरिएकामध्ये आधाभन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । हालसम्म नारायणी अस्पतालमा परीक्षण गराएकामध्ये पर्साका तीन सय २५ जना संक्रमित भेटिएका छन् । संक्रमितको संख्या बढेसँगै नारायणी अस्पतालमा गम्भीर बिरामी पनि बढेको डा. दासले बताए ।
कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या बढेसँगै चिकित्सकले स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने आशंका गरेका छन् । पछिल्लोपटक संक्रमित हुने र ज्यान गुमाउनेमा युवा र बालबालिकाको संख्या पनि रहेको र संक्रमण नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. उदयनारायण सिंहले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष कोरोनाको संक्रमणबाट बालबालिका र युवा कम सिकिस्त भएका थिए । तर, नयाँ भेरियन्टले उनीहरूलाई पनि बढी प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ । डा. सिंहका अनुसार अहिलेको संक्रमणले धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ ।
जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. नवराज सुब्बाले सरकारको मात्र भर पर्दा अवस्था गम्भीर बन्ने बताए । ‘दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण झन् जोखिमपूर्ण अवस्थामा देखापरेको छ । भारतको संक्रमण र नेपालको संक्रमण उस्तै अवस्थामा छ । नेपालमा जनसंख्या थोरै भएकाले मात्र कम देखिएको हो । यस्तो अवस्थामा राज्यका सबै तहका सरकार झन् संवेदनशील हुनुपर्नेमा भएको पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘हिजो बनेका आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, हेल्थडेस्क, कोभिड अस्पताल सबै लथालिंग अवस्थामा हुनुले अवस्था झन् जटिल हुने पक्का छ । यसैले अब सर्वसाधारणले आफैँ सतर्क हुनुपर्छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपले पालना गर्नुपर्छ । सरकारको मात्र भर प¥यौँ भने झन् ठूलो जोखिममा पर्छौँ ।’